Resaka matotra be mikasika ny fipoahana tetsy Mahamasina - Vaovao farany
Home / Unlabelled / Resaka matotra be mikasika ny fipoahana tetsy Mahamasina
Resaka matotra be mikasika ny fipoahana tetsy Mahamasina
Tsy fombanay eto loatra ny manao resaka misy fahamatorana 100% fa manoloana ny zava-misy dia tsapanay ho adidy ny mizara fomba fijery hitanay fa mitombina sy mari-pototra. Nadika avy tao amin'ny tambazotra Facebook ity lahatsoratra ity :
Fipoahana tetsy Mahamasina: Maro ireo fianakaviana mitady ny havany
Hatreto moa raha ny fanambarana ofisialy dia 2 no maty ary 86 no naratra vokatry ny fipoahana tetsy Mahamasina omaly 26 jona nandritra ny fety fankalazana ny fahaleovantena.
Maro anefa ireo fianakaviana mifanesika etsy amin'ny hopitaly HJRA ary misy mihitsy aza ny mahavatra mitety ireo hopitaly sy toeram-pitsaboana manodidina mitady ireo havany fa tsy mbola hita hatramin'izao.
Raha ny fanambaran'ilay tovovavy hita omaly alina tamin'ny fahitalavitra rahavavy tokoa manko, dia nisy zavatra nipoaka hoy izy tao ambany estrade nisy ireo mpihira, ary efa lasa ny Filoha tamin'io, ka ny mpanankanto Stéphanie no ampiakarina.
Nisy tifitra basy ho izy taorian'izay ary nisy olona nifanenjehan'ny zandary, miaramila ary polisy. Narenesana sioka ihany koa ny fiara iray izay hanainga teo an-toerana.
Ny zava-nisy omaly moa dia nandeha nivantana tamin'ny fahita lavitra TVM, ary tampoka dia mainty ny sary fa ny feon'ny mpanentana Françis Turbo ihany no re niteny hoe, "Aoka hilamina isika", ary kelikely dia hoe "Mivoaha izay afaka mivoaka, mivoaha ampilaminana izay afaka mivoaka".
Nahavariana fa teo dia tapaka ny TVM ary tsy nampiseho na vaovao kely momba azy io aza ny alina.
Ny alina io ihany moa dia tonga tany amin'ny HJRA ny Filoha mivady sy ny Praiminisitra, izay nialohavana ny fahatongavan'ny fanafody marobe avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana.
Ny Filoha sy ny Praiminisitra moa dia samy nanameloka izao loza izao ary nampifandray avy hatrany fa efa mihoatra ny resaka politika izao zavatra izao.
Raha mbola nilaza eo ampanaovana fanadihadiana ny minisitry ny zandarimaria sy ny tafika, ny Praminisitra kosa dia efa nilaza fa grenade offensive mahery vaika no nipoaka tao Mahamasina.
Mampametram-panontaniana amin'ny maro tokoa ity tranga ity, nisy maty lavon'ny balan'ireo miaramila araky ny fijoroana vavolombelona ve? Iza no nahavanona izao habibiana izao, satria tsy tranga voalohany izao fa dia mihoson-dra hatrany ny ao Mahamasina isaky ny miditra ao ny Filoha.Tamin'ny heritaona toy izao dia nisy ny tranga toy izao, tamin'ny investiture dia ohatri'zay ihany koa.
Raha tsiahivina aza moa dia vao vita ny famindram-pahefana nataon'i Filoha teny Iavoloha dia efa nandona zaza ny fiara mpisava lalana azy.
Tsy lazaina intsony moa ireo olona maty marobe noho ny asan-dahalo, ireo olona maty voalakon'ny hazo be misy fantsika.
Mila mijoro ny fitsarana hamoaka ny marina amin'izy ireny fa tsy matoky ary mihorohoro tanteraka ny Malagasy.
Hatr'aiza ny fampiasana ireny miaramila maro be sy fampirantiana fitaovana lafo vidy omaly tetsy Mahamasina ireny raha teo amin'ny toerana nanaovan'izy ireo fampisehoana fotsiny aza dia tsy voaharo, nefa dia entitra dia entitra ny fisavana teny an-toerana, na fourchette aza tsy tafiditra teny fa nogejen'ireo mpiambina vavahady, ka ahoana no ahatafidirana baomba, indrindra ao ambanin'ny estrade hanaovana fety?
Tsy olon-tsotra izay lazaina fa adala akory no ahita grenade offensive izany, rahateo tamin'ny herin'andro ambony efa nolazaina fa nisy grenade marobe no very, ka ahoana no tsy fantatra momba izany? Tsy nisy sazy re? Sa mitovy amin'ireo basy mahery vaika tratra nefa dia tsy hita ny olona nampiasa azy?
Tany Nosy be nahatrarana basy sy bala amin'ny kaontenera tamin'ny herin'andro teo, dia tsy ho fantatra ve ny anaran'ilay tompony?
Mampiahiahy fa dia ny Malagasy no matimaty amin'ny fitiavan-tena ka maro ireo tsy mbola mahita ny havany hatreto, mila valiny izy ireo.
Izahay ato amin'ny tranonkala Vaovao Farany dia miaray fahoriana amin'ireo maty havana/namana ary mankahery ireo izay naratra.
Resaka matotra be mikasika ny fipoahana tetsy Mahamasina Reviewed on juin 29, 2016 Rating: 5
Poritra an-daharana i Alain Ramaroson ka nitsaitsa...
Sinoan'i Soamahamanina: tsy hitrandraka volamena f...
Mihomehy amin'ny mananasy: ho raràn'ny code de la ...
Euro 2016 : maka an'i Argentine hatrany isika, hoy...
Resaka matotra be mikasika ny fipoahana tetsy Maha...
Akanjo fripy teo Mahamasina no nanaovan'dRamatoa V...
Fantatrao ve fa mpianaka Atoa Manandafy Rakotoniri...